Mafomu Ekushambadzira & Mitengo yeMitengo CPC, CPM & CPV
Isu tinopa midhiya inoshanda kwazvo kune yepamusoro ROI.
Push Ziviso Ads
Push Notification inzira inovandudza uye inoshandisa-mushe yekubatana nevateereri vako. Iwe unogona kuwedzera zvakanyanya kusangana nezvako zvemukati uye nekupa yakanaka mushandisi ruzivo kune ako vatengi.
Ratidza kana bhana kushambadzira ndeimwe yenzira dzinozivikanwa uye dzechinyakare dzekushambadzira kwedigital. Ratidza kushambadzira kunogadzira kuziva chiziviso uye kuzivikanwa. Froggy Ads kushambadzira chikuva inotsigira ese akajairwa IAB mabhanji saizi.
Kushambadzira kwevaNazi ndiko kubatanidzwa kwemukati wekushambadzira newebhusaiti kana sevhisi nenzira yekuti inosanganidzana nezvimwe zvakasara zvinoratidzwa maererano nezviri mukati kana maitiro. Zviziviso zvechizvarwa zvinonyanya kubata kupfuura mabhena.
Vhidhiyo yepamhepo ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekushambadzira. Froggy Ads vhidhiyo kushambadzira ine mutengo unoshanda, inoteedzereka, inogona kuve yakanangwa zvakanyanya, ichikubvumidza iwe kuti utore meseji yako pamberi petsoka dzeziso rekurudyi nemhedzisiro yepamusoro.
Rudzi rwehwindo rakazara rinovhura kuseri kweiyo browser hwindo rewebhusaiti. Kupesana neye pop-up kushambadzira, iyo inovhura pamusoro peiyo browser hwindo, pop-pasi haina kushomeka zvakanyanya sezvo ichihwanda kuseri kwemamwe windows. Pop-pasi pekushambadzira fomati inoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira kwedigital.
Rudzi rwehwindo rakazara rinovhura pamusoro pewindow browser yewebhusaiti. Kusiyana neap-pasi peshambadziro, iyo inovhura kuseri kweiyo browser hwindo, pop-up inonyanya kufadza sezvo ichivhara mamwe windows Pop-ups kushambadzira kunogona zvakare kuve nemutambo, odhiyo kana vhidhiyo kukwezva vashanyi.
Yekutanga kushambadzira izere yakazara skrini yekumhara mapeji ari kurodha pakati pemapeji emushandisi chikamu cheimwe nguva. Interstitial kushambadzira ndeimwe yemhando dzakakurumbira dzemashambadziro nekuda kwehuwandu hwekuratidzira kuwedzera kurodha pasi uye mari.
Vateereri kana Verified Vateereri inomhanya ye network kana RON. Iyi sarudzo yekutenga midhiya inoonekwa uye inotenderera kushambadza pane chero mawebhusaiti uye mapeji enetiweki. Iyo inoshandiswa kune yekushambadzira arbitrage uye webhusaiti kubatanidzwa. Vateereri vanopa mafirita eIAS uye DoubleClick.
Isu tinoita kuti chimiro chinobhadhara chinoshanduke kune chero chinangwa nebhajeti. Yedu chikuva inoshanda pane chaiyo-nguva kubhidha (RTB) system. Iyo yepamusoro iwe yaunobhidha, iyo yepamusoro yekuisa yako kushambadzira zvinyorwa zvichave nazvo.
Bhadhara kuona kushambadza
Bhadhara mari yekudzvanya
Shambadza mumatanho matatu: Saina kumusoro, isa mari uye utange kuwana traffic. Zviri nyore kwazvo!
Tsvaga Us At
MEjlovanget 14,8381 kana,
Tsigira [@] froggyads.com
Copyright FROGGY ADS 2020. Kodzero dzose dzakachengetedzwa